အမျိုးအစား: Service ကိုဝန်ဆောင်မှု, ချိုးကွေ့
ရေနံဝယ်ယူတဲ့အခါမှာဘယ်လို, ဘယ်မှာဘယ်လိုညွှန်ပြနေသည်ဒြပ်ရေနံသို့မဟုတ် semisynthetic ခွဲခြားသတ်မှတ် mobil1 နှင့်တိကျသော marking avtomaselMotornye စားသုံးဆီအပေါ်ဥပမာထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကိုသှားဖို့အဓိကနှစ်ခုခွဲခြားထားပါသည် ...
အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပါးပျဉ်း၏အဖွင့်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းအာရုံခံနှိုးဆော်သံ StarLine A61 startup မှာချောင်းကိုနှင့်လုပ် labovuhe အဘယ်အရာပေါ်တွင်ပြသသောလက်နှိပ်ဓာတ်မီးအပေါ်တစ်ဦးပွင့်လင်းပါးပျဉ်းထွန်း? အဲဒါကိုအတိအကျမယ့် ...
နှိုးစက် Starline !!! , Starline A9 အပေါ်ယင်းသို့အမှိုက်သရိုက်ခဲ့တာကိုပထမဦးဆုံး programmable key ကို FOB ဖွယ်ရှိဤနေရာတွင်ညွှန်ကြားချက်ထဲက footer ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်သည် Programmable နှင့်ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်ရည်ရွယ်ချက် 1 အဓိကသော့ချက် FOB ခလုတ်ကြည့်ပါ ...
ဘယ်ကုမ္ပဏီ၏ xenon ထား? B ကိုသငျသညျ Plett ပင် deshvy xenon အလင်းမဆိုဟေလိုဂျင်ကမ်းပါးမတ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုမိမိ probyvat လိုအပ်သောရေးသားခြင်းမပြုမီ။ Osram, Narva, General Electric, များထံမှကောင်းသော xenon ...
ကကားတစ်စီး 4-လေဖြတ် Scooter အတွက်ဆီကိုလောင်းဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ ?? အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမ Esle ?? အဘယ်သူမျှမ။ တစ်ခါတုန်းကစမ်းသပ်။ ဒါဟာပိုပြီးသိပ်သည်းသည်ပင်စစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းမော်တော်အတွင်းရှိမှုကိုနှိမျနငျးအဖြစ်နားထောင်ကြလော့။ ငါ ...
k36 carb ။ မည်မျှဒီဆိုင်ကယ်ပေါ် 36h ၏အလယ်တွင်ဟုသတ်မှတ်သီးခြား float အခန်းထဲကအတူဟောင်း carb ဖြစ်ပါသည်သတိရလော carb k80 ညှိဖို့ဘယ်လို အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအားဖြင့်-36 ညှိနှိုင်းမှုကွာဗူရတောညှိနှိုင်းမှုဖြစ်ပါတယ် ...
Defferentsial 2106 vases ။ ဘာဘီယာအရက်ချက် differential ကိုလျှင်ပြောင်းလဲပစ်ကြမည်နည်း သာ. ကောင်း၏နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပိုဆိုးသည်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း ဒါဟာအဆက်မပြတ်အညီအမျှနှစ်ဦးစလုံးဘီး spinning (lock) နှင့်စက်ကိုယ်တိုင်ကတကယ်သွားမည်မဟုတ်လှည့်ပါလိမ့်မည် ...
ငါဘယ်လိုပန်းအိုးပေါ်မှပါးပျဉ်းဖွင့်ကြဘူး 2107? Cable ကိုရဲတိုက်ထဲကဆွဲထုတ်ခဲ့သည်! အခြေအနေကပိုရှုပ်ထွေးပါ! တော်တော်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဂန္ပါးပျဉ်းမှာတော့ဒရိုင်ဘာရဲ့အခြမ်းရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ကေဘယ်လ်ဂျာကင်အင်္ကျီတစ်လက်ကိုရောက်ရှိဖို့ငါသိအတော်လေး (be နိုင်ပါတယ် ...
ပေးတဲ့ dialog ကုဒ်တွေနဲ့နှိုးဆော်သံ scan ဖတ်သို့မဟုတ်မ။ kodgraberami ။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ထားပါ: ဒါလျှင်အဆိုပါနိယာမတစ်ခုဖြစ်သည်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှအထက်ပါလင့်ခ်ကဆိုသည်။ စက်၏ပိုင်ရှင်ခလုတ်ကိုကိုခံရ၏။ အဘယ်အရာကိုမျှတွေ့ကြုံတတ်၏။ တစ်ဦးက code ကိုကြားဖြတ်ဖြစ်ပါတယ် ...
သင်ကချွတ်မဆေးကြောလျှင်အထူးဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူအဟောင်းဆေးသုတ်ကိုချွတ်ဆေးကြောရန်သင့်လက်ဖြင့် scooter ရဲ့ပလပ်စတစ်ဆေးသုတ်ဖို့ဘယ်လို (ဖြစ်နိုင်ရင်) တဖြည်းဖြည်း (အချို့သောရေနှင့်အတူ "မီးမောင်းထိုးပြ" မျက်နှာပြင်ကိုထိန်းချုပ်) ရေနှင့်အတူသုညမှမျက်နှာပြင်တဖြည်းဖြည်း Primer နှင့်အတူမျက်နှာပြင် Primer နှင့်အတူမျက်နှာပြင် Primer ...
ကာဗွန်အခန်း filter ကိုထက်သမားရိုးကျ filter များ ?? ငါမယုံနိုငျ ?? ပိုကောင်းထံမှကွဲပြားခြားနားသည် ...
ကာဗွန်အခန်းစစ်ထုတ်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့ကွာခြားသည်၊ ပိုမိုစစ်ထုတ်သည်။ ငါမယုံနိုင်ဘူး ... သူတို့ဒီမှာပြောခဲ့သလို - ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွင်ရပ်နေခြင်း၊ “ လေကောင်းလေသန့်ကိုပိတ်ဆို့တဲ့အထိထိသွားလိမ့်မယ်။ ”
ဘယ်သူကလျှပ်စစ်တာဘိုင်ကိုကားပေါ်မှာတင်သလဲ။ သူမ၏နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲပိုကောင်း? rzhu))))))))))))))))))))) небеспокойтесь - ивыбудетеисцеляться ... всеходит ... этомоторывновом))) တာဘိုင်သည် Processor ပန်ကာ၏ပုံစံဖြစ်သည်။
သုညခုခံ filter နှင့်သမားရိုးကျလေထုစစ်ထုတ်မှုအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ သို့သော်“ Bilkon” tuning စင်တာမှကျွမ်းကျင်သူများသည်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါ။ အကယ်၍ သင် filter နှင့်ယင်း၏အိမ်ကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားလိုက်လျှင် motor power ...
ကားထဲမှာ ABS ဆိုတာဘာလဲ မျိုချရန်သာကျန်ရှိနေသေးသောဂျုံယာဂုပုံစံဖြင့်ရှင်းပြသည် - ထို့ကြောင့်ဘီးသည်ကတ္တရာပေါ်သို့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်။ မရသည့်အပြင်ကားသည်လျှော။ မစီးရသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယင်းအခိုးခံရကားတစ်စီးပေါ်ကိုယ်ထည်အရေအတွက်အားသတ်ပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ။ client ကိုကဆီလျှော်သည်တွန်းလှည်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည် .. ) ပိုက်ဆံကလူသူကပြောတယ်စေနိုင်သည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလိမ္မာပါးနပ် apupet! တွန်းလှည်းခိုးယူခြင်း, ...
လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုခြင်းကို Catalyst အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ??? ဦးနှောက်အရောအနှောချမ်းသာပိုဆိုးပြင်ဆင်ထားကြသည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်စားသုံးမှုတိုး။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်း giravlicheskogo အိပ်ဇောခုခံကြောင့်ပါဝါအတွက်တိုးနှင့်မ။ ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် ...
စတီယာရင်ဘီး၏ဘယ်ဘက်ရှိ SHIFT LOCK ခလုတ်သည်ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ သူမအတွက်ဘာလဲ
စတီယာရင်ဘီး၏ဘယ်ဘက်ရှိ SHIFT LOCK ခလုတ်သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ သူမအတွက်ဘာလဲ လက်စွဲစာအုပ်အရအော်တိုဂီယာလီဗာကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်၊ ထို့နောက်ဤကမ္ပည်းဖြင့်သော့ကိုအက်ကြောင်းထဲသို့ကပ်ထားခြင်းကကူညီနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲမီးဖိုစက်ဒေဝူး Nexia ကနေအအေးလေကြောင်းမှုတ် ??? , ဒါကြောင့်, စုဆောင်းသည်, သို့မဟုတ်ဥဇဘက်, ဒါမှမဟုတ်ကာဇက်စတန်, ဒါပေမယ့်သူကနွေးရဲ့, သူတို့ကမီးဖိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ...
အဘယ်သို့ငါဖြစ်ပျက် zakipechu အင်ဂျင်မဟုတ်ပါ, အင်တိဖရိစ်ဓါတ်နှင့်အတူအင်တိဖရိစ်ဓါတ်ရောထွေးနိုင်ပါသလား? တဦးတည်း၏အပျေါအခွခေံလျှင်, သင်မပေးနိုင်, သငျသညျမတတျနိုငျ! က antitosol ပါလိမ့်မယ်။ အေးခဲအင်ဂျင်ကို။ ဟုတ်ပါတယ်, ဖွင့်မရ ...
VAZ - 2114၊ 1,5 injector သည်အအေးမတက်ပါ
VAZ - 2114, 1,5 injector, ချမ်းအေးတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းမစတင်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းမှာဝါယာကြိုးများဖြစ်သည်။ အမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည် - အအေးခံစဉ်၊ လက်ကိုင်အာရုံခံကိရိယာတွင်ခုခံမှုပျောက်ကွယ်သွားပြီးစက်နှိုးခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းအချိန်များ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,528 စက္ကန့်ကျော် Generate ။